सरकारी अधिकारीलाई आममाफी दिने तालिबानको घोषणा - Rastrakokhabar
सरकारी अधिकारीलाई आममाफी दिने तालिबानको घोषणा
भदौ १, २०७८
काठमाडौं । तालिबानले सबै सरकारी अधिकारीहरुलाई आममाफी दिने घोषणा गरेको छ । तालिबानले पूर्ण मनोबलका साथ काममा फर्किन सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तालिबानले यस्तो बताएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एएफपीले तालिबानलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ-सबैका लागि आममाफीको घोषणा गरिएको छ । त्यसैले तपाईँहरुले आफ्नो दैनिक काम पूर्ण मनोबलका साथ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ।
अफगानिस्तानलाई तालिबानले कब्जामा लिएसँगै अफगानिस्तानका मानिसहरुमा अहिले डर तथा आशंका देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा तालिबानले सरकारी अधिकारीलाई आममाफीको घोषणा गरेको हो ।
तालिबानले यसअघि सरकार र पश्चिमा मुलुकको संस्थामा काम गरेका अधिकारीलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्न सक्ने आशंका मानिसहरुमा थियो । तालिबानले निकै बर्बर सजाय दिने गरेको र युद्ध अपराध गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि तालिबानले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
जर्मनीमा आज चुनाव, १६ वर्ष शासन गरेकी मर्केल बिदा हुँदै
अशोज १०, २०७८
अदालतमा गोली चल्यो, तीन जनाको मृत्यु
अशोज ८, २०७८
अरू मुलुकलाई बाँड्न थप ५० करोड डोज कोरोना खोप किन्ने बाइडेनको घोषणा
अशोज ७, २०७८
अष्ट्रेलियामा ६ म्याग्नेच्युडको भूकम्प
अशोज ६, २०७८
सेनाको हेलिकोप्टर जम्मूमा दुर्घटना
अशोज ५, २०७८
रुसको संसदीय निर्वाचनमा पुटिनको दल विजयी
कांग्रेसबाट को को बन्दैछ मन्त्री ?
देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नहुने
आजको राशिफल ( वि. सं. २०७८ असोज १२ गते, मङ्गलबार )
पशुपतिमा साधुमाथि खुकुरी प्रहार
अशोज ११, २०७८